Prophet Passion Java Responds To Seh Calaz Urikuita Kunhuwirira Nzara Go & Bath Ndozotaura Newe
The man if God Passion Jav is not happy with Zim Dancehall Legend who posted a video earlie making fun of the man of God Prophet Passion was not amused and fired back at Seh Calaz Telling him .
Ukagona kupusa I can help your music kusvika pana Mudiwa, Stunner or Stella chiweshe. Enda unogeza tozotangira ipapo.
Prophet Passion Java Responds To Seh Calaz Urikuita Kunhuwirira Nzara Go & Bath Ndozotaura Newe The man if God Passion Jav is not happy with Zim Dancehall Legend who posted a video earlie making fun of the man of God Prophet Passion was not amused and fired back at Seh Calaz Telling him . Ukagona kupusa I can help your music kusvika pana Mudiwa, Stunner or Stella chi